हत्याकाण्डको रहस्य नखोज्ने ?
२०५८ साल जेठ १९ मा दरवार हत्याकाण्ड भयो । २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा दुर्घटनामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भयो । यी दुबै घटनालाई नेपाली जनमानसले रहस्यमय हत्याकाण्डका रुपमा लिएका छन् र यसको यथार्थ थाहा पाउन जिज्ञासा राखिरहेका छन् ।
तर, त्यसपछिका अनेक सरकारहरु बने, अनेक राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । जुनसुकै जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि नेता र आमनागरिकको मान्यता छ, यी दुबै हत्याकाण्ड जघन्य काण्ड हो र यसको छानबिन हुनुपर्छ ।
छैन, कांग्रेस, कम्युनिष्टका सरकारहरु बने, यी दुई हत्याकाण्डको सत्यतथ्य छानबिन गराउने चासो कसैलाई छैन, सबैको ध्यान खाली सत्तामा पुग्ने र अकुत सम्पत्ति जोड्नेमा केन्द्रीत रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहास भनेकै हतियार र रक्तपातको इतिहास हो । यही क्रममा यी दुई हत्याकाण्ड भएका हुनसक्छन्, भएका हुन् । पहिले कोतपर्व भएर राणाशाहीको सुरुआत भयो, भण्डारखाल पर्व, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध रक्तपातका घटना हुन् ।
राणाशाही त सकियो, झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायक केपी ओली र प्रचण्ड यतिबेला नेकपाका अध्यक्ष छन् र दुईतिहाई जनमत, जनबलका साथ सत्तामा हालीमुहाली चलाउन पुगेका छन्, तिनले यतिबेला यी दुई हत्याकाण्डको छानबिन गराउनु पर्ने हो ।
राजतन्त्रको भूत जाग्ला भनेर यो तातो विषयलाई यी दुईले नछोएका होलान् । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याकाण्डले नयाँ राजनीतिक मोड ल्याउला भनेर छानबिन नगराएको हुनसक्छ । स्मरणीय छ, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित ओलीका पनि नेता थिए र वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका पति थिए मदन भण्डारी ।
नेपालको दरवार हत्याकाण्डले विश्व हल्लायो । अहिले पनि अनेक प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने क्रम जारी छ । तर नेपाल सरकार दरवार हत्याकाण्डबारे मौनता धारण गर्न उचित सम्झिरहेको छ ।
वीरेन्द्र साह्रै लोकप्रिय राजा थिए । विश्वनेताहरुले समेत मानेका र प्रशंसा गरेका राजनेता थिए । अहिले आएर अनुमान गर्न सकिन्छ, यो अवस्था ल्याउनकै लागि वीरेन्द्र बंशविनास गरिएको थियो । दरवार हत्याकाण्डका योजनाकार चाणक्य को थियो त ? यही प्रश्नमा दरवार हत्याकाण्ड आज पनि जेलिएर रहेको छ र यसको जवाफ नआउन्जेल यो हत्याकाण्ड रहस्यमय रहिरहनेछ ।